Waxsoosaarka Warshadaha - Dharka Dharka Dharka ee Shirkadda Co., Ltd.
Hoyga > Warka Warshadaha
Maxay tahay sababta calaamadda dunta ah ee kahortagga been-abuurka loo xardhay?
Macaamiisha qaar waxay u maleynayaan inay sidoo kale jiraan qufulo ku wareegsan calaamadaha tolmo wanaagsan. Xaqiiqdii, tani waa faham qaldan. Calaamadda la duubay ayaa gees leh, taas oo ah geeddi-socodka ku darista soo socota.
Waa maxay hordhaca nidaamka xarig jacquard jacquard habka hordhaca
Jacquard ka dib muuqaalka xariga seddex-geesood qurux badan, jacquard hannaan waara, weligoodna ma liicdo.Bacnd jacquard, calaamadda si muuqata u muuqata, midab dhalaalaya, darajo aad u badan, ma kordhin karto oo keliya qiimaha lagu kordhiyay alaabada, Waxay sidoo kale kor u qaadi kartaa sawirka ast......
Sidee loo kala saaraa tayada shabakadda?
Waxaa jira noocyo badan oo xirashada websaydhka ah, kuwaas oo si ballaadhan loogu isticmaalo qaybaha kala duwan ee warshadaha sida dharka, daabacaadda sumadda, qalabka kabaha, shandadaha, warshadaha, beeraha, saadka milateri, iyo gaadiidka.
Nidaamka dheeh ee dharka dharka lagu xidho
halkan waxaa ah laba habab oo waaweyn oo lagu midabeeyo xargaha dharka. Mid waa dheehida ugu badan ee la isticmaalo (dheehida caadiga ah), taas oo inta badan lagu daaweeyo xargaha dharka lagu xaliyo xal dheeh kiimiko ah. Qaab kale ayaa ah in la isticmaalo rinji, kaas oo ka samaysan waxyaabo aad u ya......
Gubashada habka aqoonsiga ee waxyaabaha sida caadiga ah loo isticmaalo webbing:
Sidee loo qeexaa midabka soonka dhirbaaxada? Heerka tijaabada ee midabka soonka dhirbaaxada